Yini okufanele siyenze uma ibhetri yemoto yakho idonsa? Vele ulethe ikhebuli ye-Emergency booster. - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Yini okufanele siyenze uma ibhetri yemoto yakho idonsa?
Vele ulethe iIkhebuli ye-booster ephuthumayokanye ne-12V Power bank.
Akunandaba noma ngabe i-EV noma imoto kaphethiloli, ukulahleka kwamandla kuyinkinga engenakugwemeka ezimotweni. Ikakhulukazi uma imoto imiswa isikhathi eside, ibhethri lizoba sesimweni "sokulala" sokuphuma kancane, okwenza ibhethri elincane liphelelwe amandla.
Iziqali namashaja webhethri yemoto ziyimigqomo emincane eminyene yokugcina amandla kagesi, futhi eziningi ziza nezinsiza ezakhelwe ngaphakathi eziwusizo. Bazophinda bagcwalise ngezintambo ezijwayelekile zokuqalisa zokwengeza, ama-adapter ama-wall-plug, amachweba e-USB ezimotweni ezihambayo noma ngogwayi wesitayela se-light-12-volt adapters wesilisa. Izinketho eziningi zokuqala zebhethri eziphathekayo zinikela ngenhlanganisela yezinketho ezine zokuvuselela.
Amabhethri ayingxenye ebaluleke kakhulu yezimoto ezintsha zamandla. Uma ibhethri liphelelwa amandla, imoto ngeke iqale ngokujwayelekile. Ngizokufundisa izinyathelo ezithile eziphuthumayo.
Boleka aukusebenza kahleimoto
Thola izigxobo ezinhle nezimbi zamabhethri amabili ezimoto
Okokuqala xhuma izingongolo ezinhle zezimoto ezimbili ngocingo olubomvu
Bese uxhuma izingongolo ezingezinhle zezimoto ezimbili ngocingo olumnyama
Ngemuva kwayo’s ixhunyiwe, imoto izoqala.
Umthetho Ophuthumayo Wokunikezela Amandla
Sebenzisa ibhange elikhethekile lamandla okuphuthumayo elinikezwe emotweni
Xhuma kwibhethri lemoto
Bamba isiqeshana seshaja kokuthunyelwe kokuxhuma
Cindezela inkinobho yamabhange kagesi ukuqala imoto
Sicela uxhumane nathi leo.lee@connexions-tech.com nganoma yimuphi umbuzo
Okwe Ikhebuli ye-booster ephuthumayo